Q: Ahoana no miantoka ny tsara Quality azonay?
A: Voalohany indrindra, QC Manana sampan-draharaha ho an'ny fanaraha-maso avy amin'ny Raw Quality ara-nofo ka hatramin'ny vokatra vita. Faharoa, isika dia hanao Inpsection mandritra ny famokarana sy aorian'ny Production. Fahatelo, ny vokatra rehetra dia hiharam-pitsapana eo anatrehan'i nampirina entana ka naniraka avy. Aoka haniraka Inspection na lahatsary fitiliana raha tsy ho avy mpanjifa noho ny mijery personly.
F: Ahoana ny amin'ny warrenty?
A: Izay rehetra manana ny Products 1 year warrenty amin'ny fiainana-Long Maintenance fanompoana. Dia hanome anareo amin'ny fanohanana ara-teknika maimaim-poana.
Q: ve ianao manome izay fanampiana momba Products Operation?
A: milina rehetra ao anatin'ny fampidirana entana, Manuals amin'ny teny Anglisy izay manana soso-kevitra rehetra ny asa sy ny fikojakojana tolo-kevitra nandritra ny mampiasa. Mandritra izany fotoana izany, dia mety koa manohana anao amin'ny fomba hafa, toy ny manome anareo Video, Show sy hampianatra anao fa aoka ianareo ao amin'ny orinasa na ny injeniera ao amin'ny orinasa raha nangataka.
Q: Inona no Hataoko fa Parts hiantra?
A: enclose sasany izahay haingana amin'ny faritra anaovan'ireo mba, ary koa ny sasany fitaovana ilaina Fa izao milina izay maimaim-poana ho handefa ny Order wtih miaraka amin'ny fitaovana boaty. Manana piesy rehetra manatona ao anatin'ny Boky Torolàlana amin'ny lisitra. Azonao atao fotsiny ny milaza amintsika ny piesy No. In hoavy. Afaka manohana anao izahay ny làlana rehetra. Ankoatra izany, fa beveling milina sy fitaovana mpikapa bevel Manisika, izany Karazana comsumable ny milina. Tsy mangataka foana tapaka easyly marika izay afaka mahita amin'ny tsena eo an-toerana rehetra manerana izao tontolo izao.
Q: Ahoana no Delivery Date?
A: Mila 5-15 andro modely ho an'ny tsy tapaka. Ary ny namboarina 25-60 andro milina.
Q: Inona no Hataoko fa antsipirihany bebe kokoa momba io milina na silimars?
A: Pls manoratra ny fanontaniana sy ny fepetra takiana ao amin'ny ambany nanontany boaty. Maso ka dia hamaly anao amin'ny Email na Phone tamin'ny 8 ora.